၂၀၁၂ ရွာသူရွာသား စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၂၀၁၂ ရွာသူရွာသား စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း
၂၀၁၂ ရွာသူရွာသား စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း
Posted by manawphyulay on Feb 22, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 30 comments
ခုနောက်ပိုင်း နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက်သုံးနေကြသလဲ။ ဘယ်သူတွေ သုံးနေကြသလဲ။ ဘာတွေသုံးနေကြသလဲဆိုတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခု ကောက်နေတာကို တွေ့ရတော့ အတွေးတစ်ချက်ဝင်လာတယ်။ သူများလိုတော့ နိုင်ငံအလိုက် မြို့နယ်အလိုက် စစ်တမ်းတွေ မယူနိုင်သေးပေမယ့် ရွာထဲမှာ စစ်တမ်းကောက်ရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်။ ဒါနဲ့ သိချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းချင်မိပြန်တယ်။ ရွာထဲမှာ စစ်တမ်းကောက်ရရင်ကော ဘယ်လိုများနေမလဲ။ မနော သိချင်သလို ရွာထဲမှာ ရှိတဲ့သူတွေကော သိချင်နေလား… သိချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းချင်မိတယ်။
ရွာတစ်ရွာမှာ ရွာသူကြီးရဲ့ လက်အောက်မှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုသလို ရွာထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ ဘယ်သူတွေက ဘယ်အပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားနေသလဲ။ ရွာလေးဒီထက်စည်ကားဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်နေသလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေ သိချင်နေမိလို့ ရွာထဲကို စစ်တမ်းကောက်ချင်တော့ ဘာတွေသိဖို့လိုလာသလဲ အရင်စဉ်းစားမိတယ်။
အရင်ဆုံးကတော့ ရွာထဲမှာ ရွာသူရွာသားပေါင်း ၇၆၉၆ ယောက်ဆိုတဲ့ လူပေါင်းများစွာကို တွေ့ရှိရတယ်။ သူတို့တွေ ရွာထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာ ပျော်နေသလဲ ဆန်းစစ်ချင်လာမိတယ်။ ဒီတော့ သိချင်တာလေးတွေ မေးချင်မိပြန်ပါတယ်။
၁။ ရွာသူရွာသားပေါင်း ၇၆၉၆ ရှိတဲ့အထဲမှာ ရွာသား ဘယ်နှယောက်၊ ရွာသူ ဘယ်နှယောက်ရှိနေပါသလဲ။
၂။ နောက် ပိုစ့်ရေးသားသူပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ အမျိုးသား ရေးတာ များသလား။ အမျိုးသမီးရေးတာ များပါသလား။
၃။ ပိုစ့်မရေးပဲ ကော့မန့်ပဲ ပေးသူတွေကော ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ဒီမှာလည်း အမျိုးသားရေးတာ များပါသလား။ အမျိုးသမီးရေးတာ များပါသလား။
၄။ ပိုစ့်လည်း မရေး ကော့မန့်လည်း မပေးပဲ စာဖတ်သူ မန်ဘာကရော လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
၅။ မန်ဘာမ၀င်ပဲ လာရောက်ဖတ်ရှုနေသူကရော တစ်နေကုန် ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။
၆။ တစ်နေကုို မန်ဘာအသစ်ဝင်သူ လူဦးရေ ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက်ဝင်ပါသလဲ။ အမျိုးသား လူဦးရေနဲ့ အမျိုးသမီး လူဦးရေ ဘယ်လောက်ဝင်လာပါသလဲ။
၇။ ပညာရေး၊ နည်းပညာ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စတဲ့ ဘယ်အရာတွေကို အရေးများပါသလဲ။ ဘယ်အရာတွေ အားနည်းနေတာကို တွေ့ရှိရပါသလဲ။
၈။ ၂၀၁၂ ကုန်မှာ ပိုစ့်ရေးသားများသောသူနှင့် ပိုစ့်အရေးကောင်းသောသူများ၊ ပုံမှန်ဝင်ရေးသောသူများကို ရွာသူကြီးမှ ဆုပေးဖို့ ဆန္ဒရှိပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး မေးချင်ပါတယ်။
သိတဲ့သူများ ဖြေပေးကြစေလိုပါတယ်ရှင်။ ၂၀၁၂ မှာ ရွာသူရွာသား စစ်တမ်းလေး သိချင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ စစ်တမ်းထဲမှာ လိုအပ်ချက်လေးများရှိခဲ့ရင် အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ရွာသူရွာသားညီမယ်ဆိုရင် ရွာတစ်ရွာရဲ့ စစ်တမ်းလေးလည်း အောင်မြင်စွာ ရရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေမိပါတယ်။ ရွာသူရွာသားအပေါင်း ၀ိုင်းဝန်းစစ်တမ်းတစ်စောင် ပြုစုကြရအောင်နော်
သဂျီးတော့ တိလိမ့်မယ် …
များကတော့ တီခုမှ သိဖူးရယ် …
အဲ … ဒါပေမယ့် နံပါတ် (၂) အတွက်ကတော့
များ ထင်တာပြောရရင် ..
ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် တွေပဲ များလိမ့်မယ် ထင်တယ် …
များ အီပါအီဝင်ပေါ့ … အဟီး …
အိုက်ဒါ အိုက်ဒါ ….
ဒါတွေအကုန် မိုက်ကယ်လ် သဂျိုင်ခီး သိတယ် ဗျ …
စစ်တမ်းရလာတော့ အစ်မတော်က ဘာလုပ်မလို့တုန်း …
အဲ့ဒါလေးတော့ သိချင်သား …
စစ်တမ်း ဆိုတော့ ဆန်းသစ်
ဆန်းသစ် တော့ တန်းချစ် …
ယယြာချေဖို့နဲ့ တူရဲ့ …….
သူကြီးကတော့ အတိအကျသိနိုင်မှာပါ။ဒါပေမယ့် ယောကျာ်း၊မိန်းမမခွဲခြားနိုင်
စစ်တမ်းရရင် ဆန်းတစ်မယ် ဆန်းတစ်ပြီးရင် တမ်းချစ်မယ်
ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ…သူ့ အကွက်နဲ့ သူ
အကွက်တွေက မြင့်တော့ လိုက်မမီတာခက်တယ်
အဖြေသိရင် ဆု ပေးမှာလားဗျ …..
( ဟီး…သိမသိပဲကိုးးး )
သများတို့က ဒါမျိုး ရိုးသွားပြီ။
ဒီလို မျိုး သများ မဖြေနိုင်တာ မမေးဝူးလို့ချိုမှပဲ..
မေးတယ် ဆိုမှတော့ သူများ ဖြေနိုင်တာ မေးမှာပေါ့လို့…
ဒါမှ ကမန်းများများ ရမှာပေါ့လို့.. လို့လို့.. အို့.. ဝေါ.. (အန်ချင်အိတာ)
ကြာတော့ ကြာပေါ့နော်.. နောက်ထပ် ရှိသေးတယ်.. သစ်ပင်စိုက်ခိုင်းတယ်.. မြေကြီးပေးတယ်
ဒါမျိုးလေးတွေ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး.. ဟွန့်.. တူများ မရိပ်မိပဲ အကွက်ထဲပါလာအောင် သိုင်းကွက်နင်းရတယ်အေ့.. ညဉ်းကလည်းအေ.. အကြံထုတ် တာ အနံ မထွက်စေနဲ့ပေါ့.. ကြားလား။ အယ်.. မပြောတော့ပါဘူးအေ.. သများပြောရင် လွန်သွားအုန်းမယ်။
ဆူးရေ… ဘာတွေပြောနေပါလိမ့်………. နည်းနည်းဝေးလို့ထင်တယ် နားလည်တော့ဘူး။ သိချင်တာလေး မေးမိတာ အပြစ်လားဟင်….
အဲလိုသိချင်တာဟုတ်ဝူးလေ… ခုသိချင်တာက အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဘယ်လိုဆိုတာ သိချင်တာပါ။
ဟိုဒင်းလေ အမျိုးသားက ကျား ဖြစ်မယ် ၊ အမျိုးသမီးက မ ဖြစ်မယ်ထင်တာပါပဲ၊
အီဖေကို ကတော့ ဝင်ဖတ် ဝင်ကလိ အမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဂဇက်စောင့် ဖြစ်ကြောင်းပါ ။
(ဂဇက်စောင့်ဟု ဆိုရာတွင် လူမသိသူမသိ တရားမဝင် စောင့်ခြင်းကိုဆိုလိုပါကြောင်း ။ ။
အမလေး မန်းလေးဂဇတ်မှာ ကျားမခွဲမနေနဲ့
အခုက ကျားဆိုရင်မဖြစ် မဆိုရင်ကျားဖြစ်နဲ့
အပေါ်ဆုံးက ဘောပြားဆိုတဲ့ကြီးမိုက် နင်တော့နော် စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်လိုက်ရရင် ကုန်းကုန်းဖြစ်တော့မယ်။
ဟွန့်လူဆိုး ရှောက်သီးဆေးများမ၀ယ်ဘဲနဲ့ လာလာနှိုက်စားနေတာ မမအံဇာနဲ့တိုင်ပြောမှာ။
အစ်မမနောရေ သားတို့က နဂိုကမှ အူကြောင်ကြောင်ပါဆိုမှ
မမမေးတာတွေက ရွာသာကြီးဆေးရုံသွားနိုင်လောက်တဲ့ အဆင့်မှာရှိတယ်နော့။
ရွာသာကြီး သွားဖို့ နာအကုန် တာဝန်ယူဒယ် ..
နင်ဂေါက်ရင် နာ့ကို လှမ်းပြော …
……………… …………… …………….. ………….. ……………
thanzin cho says:
သံစဉ်ကတော့ အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ စာပဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ခု ဒီအပိုင်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ရှင်။ စာတော့ မရေးတတ်လုိ့ မရေးပါဘူး။ သိရင် ဖြေပေးကြပါလား…
ရွာသားတွေကို မောင်းထုပြီး အစည်းဝေးခေါ် စာရင်းစစ်ငှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုတာဝန်ပေးလို့
သူကြီးအလုပ်ရှုပ်အောင် လုပ်မလို့လား အန်တီမနောရယ် ။ ဧကန်ဒ တော့ကျွန်တော်တို့ရွာကြီးကို
ဒီအိုက်ဒီယာကောင်းတယ်ဗျို့။ ဒေါ်Kaiကြီးတစ်ယောက်တော့သိမှာပါ ကျွန်တော်တို့တော့ ဟိုးတစ်နေ့
ကမှ တောင်ပေါ်တောထဲက မှတ်ပုံတင်လေးရပြီး ရွာရောက်တာမကြာသေးတော့မသိဘူးဗျ။
အန်တီမနောတို့စစ်တန်းကောက်ပြီးမှပဲ ရွာသူစာရင်းလေးတွေပါသိရမှာမို့ အဲတော့မှအပျိုလိုက်လှည့်တော့
မယ် ။ ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလိုတော့ “ကွာလယ်ဆောင်” ပေါ့ အပျိုလှည့်မယ်ပြောတာပါ။
ဗျို့ ကိုရှူံးရေ ခုမှပေါ်လာတယ်ပေါ့။စစ်တမ်းကောက်မယ့်ချိန် ကွက်တိပါလား။
ကိုရှုံး – ပျောက်နေတာကြာပါပေါ့။
အတွေ့အကြုံလေးများ မျှပါဦး။ :-)
ရှမ်းပြည်မှာနေဖူးလား ဒါမှမဟုတ် ရှမ်းစကားသင်ဖူးလား သို့မဟုတ် ရှမ်းမလေးကိုချစ်ဖူးလား?
အော် ရှမ်းစကားလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်နေကြတယ်ပေါ့။
အဆိုတော် ဆိုင်မောဝ်သွားသတိရတယ်ဗျာ။မဆီမဆိုင်နော်။သူကြီးက ဖြေမပေးဘူးနော်။
စနိုး…. စာတွေကိုဘေးမကျော်အောင် စာရေးရင် စပေ.ဘားလေး ပုတ်ပေးနော်..
အော် ဆရာမလေးမနောရယ် ဘဘကတော့ စစ်တမ်းတွေဘာတွေထက်
တူမလေးရေးတဲ့ ကဗျာပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကွယ်
ရသ လား၊ သုတလား
ဘဘက တော့ စစ်တမ်းထုတ်တာနဲ့ စာရင် စာပဲဖတ်ချင်နေသူပါဆရာမလေးရယ်။
စစ်တမ်း ………. စစ်တမ်းးးးးးးးးးးးးးး !!!!!!!!!!!!!
စစ်တမ်းကောက်ရင် အပြောချိုတဲ့ အပျိုချောတွေရဲ့ လိပ်စာအတိအကျသိချင်တယ် …
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘွဲ့တံဆိပ်များများရအောင် ပေါင်ပြီးလှူထားတာ အခုအကြွေးဝိုင်းနေလို့ ပိုက်ဆံချေးမလို့လေ … အပျိုလေးတွေဆိုတော့ ပြန်မတောင်းလောက်ဘူးထင်လို့ .. ပြန်တောင်းရင်လည်း ဆပ်စရာမရှိရင် လူပဲသိမ်းခိုင်းရမယ် …..